Resaka nifanaovan'ilay olona matro-pijery - Wikipedia
Resaka nifanaovan'ilay olona matro-pijery
Ny Resaka nifanaovan'ilay olona matro-pijery dia lahatsoratra ao amin'ny literatioram-pahendrena mesopotamiana nosoratana tamin'ny faraparan'ny taonarivo faha-2 tal. J.K. tany Babilona. Resaka ifanaovan'ny olona roa izany ka ny iray mpanan-karena ary ny iray mpanompony. Io lahatsoratra io dia maneho ny lafiny feno fanakianana. Resaka ifanaovan'ny olona miaina ao anaty fahalalahana sy ny olona miaina ao anaty fahandevozana izany. Ny tompo, izay tsy misahana asa, dia nitady zavatra hasainy. Nefa isaky ny tapa-kevitra izy dia mihemotra raha mahita ny lafiratsin'izany. Ataon'ny mpanompony (andevony) ho marina avokoa na ny fanapahan-keviny rehetra sy ny mifanohitra amin'ireo. Feno fahadisoam-panantenana ilay tompo satria tsy mahalala izay tokony hataony, ka nisafidy ny hamono ny mpanompony, nefa namaly ilay andevo fa tsy tokony hanao izany izy satria tsy ho afa-miaina ny tompony aorian'izany satria tsy mahay miaina samirery. Ity lahatsoratra ity dia karazana sangisangy momba ireo fitsipi-pitondran-tena, izay ahitana lafiny maro maizimaizina. Na dia tsikerainy aza ny lafim-piarahamonina maro (ny mpanjaka, ny fanambadiana, ny fivavahana amin'ny andriamanitra), dia miverina amin'ny tsoa-kevitra sahala amin'reo lahatsora-pahendrena hafa: tsy takatry ny olombelona ny fiheveran'ireo andriamanitra.
4 Lohatano sy fanamarihana
Fitantarana[hanova | hanova ny fango]
Ny tompo dia olona izay tsy manan-javatra hatao mba hiantoka ny fahavelomany, ka midonanam-poana, sady tsy mahalala ny tokony hasainy. Maro ny hevitra tonga ao an-tsainy, ary matetika dia anontaniany ny mpanompony izany. Rehefa manaiky ny fanapahan-keviny hanao zavatra iray ilay mpanompo dia miova hevitra sady mahita antony tsy hanatanterahany izay efa nanapahany hevitra, ka eken'ny mpanompony indray izany fanapahan-kevitra vaova izany, satria miombon-kevitra mandrakariva amin'ny tompony izy.
Ireto avy ireo zavatra notapahin'ny tompony hotanterahina: mandeha any amin'ny lapa, manomana fiaraha-pisakafo, mandeha mlihaza, mampaka-bady, mijoro eo anatrehan'ny fitsarana, manao firaisana ara-nofo, manompo ny andriamanitra Marduk, mampiasa vola, manao asa tsara maimaimpoana.
Rehefa nolaviny avokoa ireo rehetra ireo dia nanontany izay tokony hataony ilay tompo, ka nanatsoa-kevitra fa tsy misy azo atao afa-tsy ny mamono ilay mpanompony, alohan'ny hamonoany tena. Novalian'ilay mpanompo izany tamin'ny filazany fa tsy takatry ny fisainana na ny Lanitra na ny Tany, ka midika izany fa tsy afaka ny hahatakatra ny hevitr'izao rehetra izao ny olombelona. Nanapa-kevitra ilay tompo fa hamono ny mpanompony nefa namaly ilay mpanompo fa tsy afaka ny hovelona telo andro.
Ity lahatsoratra izay manohitra ny hevitra mahazatra andavanandro sady manarby no tsy manantena ny fihatsaran-javatra dia lohahevitra iadian'ireo manampahaizana momba ny tantara sy ny literatioran'ny Asiriana. Tsy fantatra na somonga natao hampihomehy io na sangan'asa-manam-pahaizana.
Mety ho samy marina amin'ny ampahany ireo hevitra roa ireo. Olona midonanam-poana ilay tompo izay tsy mila miasa, fa ny mpanompony dia olona malaky miovaova hevitra. Manana endrika feno fitsikerana izany ilay lahatsoratra, nefa koa asa soraratra misy fisaintsainana satria mampoiseho fa afaka hahita ny antony mazava hanaovana na tsy hanaovana zavatra iray ny olona, ka isaky ny miova hevitra dia mandrava ny fanohanan-kevitra.
Na dia izany aza dia tsy mivaona amin'ny sehatry ny fitondran-tena eken'ny besinimaro ny lahatsoratra: ny tsy fahatakarana hevitry ny andriamanitra dia misongadina hatrany. Rehefa nilaza ilay tompo fa hamono ny mpanompony mba handefa azy any ankoatra, angamba nihevitra izy fa fomba hihaonany aminy rehefa any amin'ny Fiainan-tsy-hita amin'ny alalan'ny firesahana amin'ny maty izany, mba hahazoany valin-teny amin'ny fanontaniany momba izao fiainana izao. Ity asa soratra ity izany dia tsy manalorontana ny lamina efa misy, na dia izany aza dia mahatonga azy hanaliana tokoa ny endriny.
Ludlul bēl Nēmeqi na Tononkalon'ilay olo-marina miaritra fijaliana"
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Resaka_nifanaovan%27ilay_olona_matro-pijery&oldid=977698"
Voaova farany tamin'ny 26 Novambra 2019 amin'ny 11:30 ity pejy ity.